Sidan ayaa Rinji ugu soo ifbaxay taariikhda Windows | Abuurista khadka tooska ah
Qaar badan ayaa noqon lahaa xan ku saabsan cusub Windows 10 barnaamijyadooda, iyo sidoo kale ciribtirka suuragalka ah ee qeyb weyn oo ka mid ah waana in xaalada noocaas ah ay dhalisay muran badan oo ka dhex jira dadka adeegsada barnaamijkan oo kale, iyadoo kor u qaadaysa, xitaa, naqshadeeyayaasha awood u leh inay abuuraan noocyo tijaabo ah muxuu noqon karaa interface-ka cusub ee Windows 10.
La tirtirida iyo imaatinka codsiyada cusub ayaa dadka isticmaala siisay waxyaabo badan oo ay ka fekeraan. Sababo badan awgood, waxaan leenahay ciribtirka rinji mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan Windows-ka.
1 Laakiin ma ogtahay waxa Rinji yahay?
2 Saaxiib Windows-ka daqiiqad koowaad
3 Maxaa ku cusub Windows 9x, XP iyo Vista
4 Rinjiga cusub ee Windows 7 iyo 8
Laakiin ma ogtahay waxa Rinji yahay?
Sidaan sifiican u ognahay, rinjiga ayaa ahaa codsigaas u ogolaaday isticmaalaha inuu sameeyo naqshado badan oo bilaash ah, kaas oo markaa loo dhoofin karo qaab cayiman (waxay ku xirnaan doontaa nooca Windows-ka). Iyada oo loo marayo rinjiga, inbadan ayaa ahaa isticmaaleyaashii bartay inay galaan khalkhalgelinta kumbuyuutarka habka ugu wax ku oolka badan.
Toddobaadkii hore dhammaadkiisii ​​warar xan ah ayaa ka faafay eedeyn nooca cusub ee Rinjiga in Microsoft ay si gaar ah ugu horumarinayso Windows 10, oo ah qaab App guud, oo leh shaashad taabasho iyo qaabab iswaafaqsan (shaki kuma jiro inay ka fekerayaan soo saarista muuqaalkeeda xiga).
Nooca la cusboonaysiiyay ee tan Tifatiraha garaafka ah ee garaafka ah ee lagu daro Windows Waxay noo horseeday inaan dib u eegis yar ku sameyno isbeddelkeeda iyo dhammaan isbeddelada ay ku dhacday iyadoo Windows ay sii deysay noocyo cusub. Xaqiiqdii, haddii xanta ay run tahay, Rinjiga wuxuu noqon karaa runtii tifaftire waxtar leh.
Saaxiib Windows-ka daqiiqad koowaad
Taariikhda Microsoft Rinjiga wuxuu soo bilaabanayaa 1985. Taasi waa sax, barnaamijka sawirada quraafaadka ah ee inbadan oo naga mid ahi waligood adeegsadeen, xitaa haddii wax uun wax lagu qoro, wuxuu ka weyn yahay 30 sano wuxuuna jiray jooga dhammaan noocyada Windows tan iyo bilowgeeda, maadaama noockeedii ugu horeeyey horey loogu soo daray Windows 1.0, xitaa ka hor Solitaire.
Nooca ugu horreeya ee Rinjiga ayaa runtii ahaa nuqul shatiyeysan oo barnaamij ah oo loo yaqaan 'PC Paintbrush', oo ay leedahay shirkadda ZSoft, tanuna, waxay ahayd jawaabta barnaamijka sawirka ugu horeeya ee loo sameeyay kombiyuutarada IBM, oo loo yaqaan 'PCPaint' taasina waxay ahayd aqoonta Apple Rinjiga lagu daray Apple II. Waxaa la arkaa in 80-kii aysan ahayn kuwo asal ah magacyada softiweerka.
Noocan koowaad wuxuu kaliya oggolaaday isticmaalka garaafyada 'monochrome graphics' (oo ah, ku xaddidan madow iyo caddaan, midabbo aan lahayn) wuxuuna ku badbaadiyey qaab lahaansho, MSP. Markii hore, Rinjiga looma jeedin inuu noqdo aalad loogu talagalay farshaxanada garaafyadaLaakiin si fudud hal koronto oo dheeri ah si loogu adeegsado isticmaaleyaal cusub oo kombuyuutar shaqsiyeed wakhtigaas si ay u adeegsadaan qaab muuqaal ah, iyaga oo siinaya jawi caan ah ("warqad" iyo "qalin") halkaasoo ay jiirka kula tababaran karaan.
Maxaa ku cusub Windows 9x, XP iyo Vista
Isbedelada dhabta ah ee Rinjiga wuxuu ku bilaabmay Windows 95 kaas oo, iyo waxyaabo kale, loo oggol yahay inuu keydiyo oo raro ururinta midabbada caadada ah.
In Windows 98, Rinjiga wuxuu hadda kaydin karaa sawirada JPG, GIF, iyo PNG (xitaa asal ahaan hufan, haddii sifiican sawirada Microsoft loo rakibay), marka lagu daro qaabka caadiga ah ee BMP.
Imaatinka Windows XP, midabada midabka ayaa loo kordhiyay ilaa 48 midabo iyo ficilada xitaa waa la beddeli karaa ilaa saddex heer. Suurtagalnimada si toos ah ugala soo bax sawirada sawir qaadaha ama kamarada dhijitaalka ah ku xiran kombuyuutarka. Burushyada, dhanka kale, wali waxay ku koobnaayeen hal shay oo noocaan ah, sawirada waxaa lagu keydin karaa JPG, GIF, PNG iyo TIFF wadaninimo, iyadoo aan loo baahneyn miirayaasha aan horey u soo sheegnay.
Markii dambe, markii la sii daayay Windows Vista, qaar ka mid ah isbeddelada yaryar ayaa ku yimid interface-ka (sida kan astaamaha toolbar), labo koronto oo cusub (oo loogu talagalay sawirrada sawir gacmeedyada iyo gooyntiisa) iyo "Undo" shaqeyn awood u leh inay dib ugu noqoto 10 ficil.
Rinjiga cusub ee Windows 7 iyo 8
Isbedelka ugu daran ee Rinjiga sanadihii la soo dhaafay, ugu yaraan marka ay timaado qaabeynta isdhexgalka, ayaa ka dhaca Nooc isku dhafan oo ka socda Windows 7, kaas oo qaata isugeynta Ribbon. Qalabka arjiga ayaa sidoo kale isbedelaya, iskuday lagu doonayo in lagu gaaro saameyno macquul ah oo macquul ah labadaba abuurista laga sameeyay xoqida iyo tafatirka sawirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Burush » Sidan ayaa Rinji ugu soo ifbaxay taariikhda Windows
Kani waa Project Nimbus, tifaftiraha sawirka mustaqbalka ee Adobe